सबिताको श्रीमानको पहिलो श्रीमतिले यसरी ज्यान बचाएर फुत्केकी रहेछिन, १ महिना सम्म परिवारलाई प्रहरीबाट यस्तो धम्की किन ? (भिडियो सहित) – Sandesh Press
सबिताको श्रीमानको पहिलो श्रीमतिले यसरी ज्यान बचाएर फुत्केकी रहेछिन, १ महिना सम्म परिवारलाई प्रहरीबाट यस्तो धम्की किन ? (भिडियो सहित)
छिल्लो समय चितवनको सबिता भण्डारी का’ण्डले नेपालभरी तह’ल्का पिटि’रहेको छ । यस घट’नामा सबिताका माइती परिवारले उक्त घट’नालाई आ त्मह त्या नै भएको भन्दै घर परिवारमा आ’रोप लगाइ रहेका छन् । घट’ना हो बैसाख ४ गतेको चितवनको एउटा घरमा झु’ण्डिएको अवस्थामा फेला पर्छिन सबिता भण्डारी, तैपनि आफ्नै श्रीमानको र आफ्नै घरमा | घट’नाको प्रकृति हेर्दा आ’त्मह’त्या गर्न दुरु’त्साहन गर्ने मात्र होइन परिवारले ह’त्या नै गरेको हो कि भन्ने आं’शका गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ । आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ । यससँगै निजी सवारी साधनहरु जोर–विजोर प्रणाली अनुसार चलाउन पाइनेछ ।
आइतबार बसेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
आजबाट बजार पनि चलायमान हुने भएको छ । विभिन्न सामग्रीका पसलहरु बारअनुसार र समय सिफ्ट अनुसार खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार आइतबार, मंगलबार र बिहीबार सुनचाँदी, भाँडा, विद्युतीय सामान र अन्य घरायसी सामान, अटोमोबाइल र त्यसका पार्टपुर्जाका पसल खोल्न पाइने छ । यसैगरी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार सपिङ मल, खेलकुद सामग्रीका पसल, कपडा तथा जुत्ता पसल, फेन्सी, कस्मेटिक सामान, गिफ्ट र टेलरिङ लगायत पसलहरु खोल्न पाइने भनिएको छ । यसरी बारअनुसार चल्ने पसलहरू बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म खोल्न पाइनेछ ।
त्यस्तै, रेष्टुरेन्ट, होटलहरूले भने टेक अवे र होम डेलिभरी गर्न पाइनेछ । निर्माण सामग्रीका पसलहरू बिहान ११ देखि साँझ ६ बजेसम्म खोल् पाइने छ । तर, शनिबार भने अत्यावश्यकबाहेक अन्य पसलहरू भने बन्द गर्नु पर्नेछ । खाद्यान्न पसलहरू भने हरेक दिन खुला हुनेछन् ।
तर शैक्षिक संस्थाहरू खुल्ने छैनन् । अनलाइन माध्यमबाटै पठनपाठन गरिने भएकाे छ । यसैगरी सभा, सम्मेलन, ठूला भाेजभतेर लगायन मान्छेकाे भीड हुने कार्यहरू निषेध नै गरिएकाे छ ।
Prevभोलि देखि सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय
Nextरबी लामिछाने भन्छन्, ‘ज्वाला संग्रौलाले गल्ती गरेकै हो भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइयोस्’
गंगा नदीमा तैरिदै आएको काठको बाकसमा फेला परिन् २१ दिनकी बालिका, बाकस भित्र बालिकाको जन्मकुण्डली र देवी देवताका फोटो पनि थिए
कर्मचारी छिटो घर जाउन् र बच्चा जन्माउन् भनेर टिकटक, पबजी कम्पनीको नयाँ नियम
पूजा शर्माको वाचा : जब सम्म श्वास रहन्छ आकाशलाई मेरो साथ रहन्छ